မန်ယူနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိလဲ
မန်ယူ-ဂျူဗင်တပ်စ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
23 Oct 2018 . 6:12 PM
ဒီနေ့ (အင်္ဂါ)မှာ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲတွေထဲက ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးက မန်ယူ-ဂျူဗင်တပ်စ်ပွဲပါပဲ။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မန်ချက်စတာမြေကို ပြန်လာမှာ၊ မန်ယူကွင်းလယ်လူ ပေ့ါဘာ Pogba အသင်းဟောင်း ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပြန်ရင်ဆိုင်ရမှာ စတဲ့အချက်တွေကြောင့် ဒီပွဲက ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မန်ယူ-ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ ကစားမယ့်ပွဲမှာ ဘယ်လို ထူးခြားချက်တွေရှိလဲ၊ ဒဏ်ရာရကစားသမားစာရင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ် . . .
မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် Alexis Sanchez ကို ဒီပွဲအတွက် လူစာရင်းမှာ မထည့်သွင်းခဲ့ပါဘူး။ ဖယ်လေနီ Marouane Fellaini ၊ ဖီးလ်ဂျုံးစ် Phil Jones ၊ တွမ်မီနေး Scott McTominay ၊ လင်ဂတ် Jesse Lingard ၊ ဒါလော့တ် Diogo Dalot တို့ အားလုံး ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှု မရှိသေးလို့ ဒီပွဲကို လွဲချော်ဖို့ များပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းလယ်လူ အမ်မရီချန် Emre Can ဟာ အခုပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်သလို လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ ဘယ်ဘက်ခြေချင်းဝတ် ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ မန်ဇူကစ် Mario Mandzukic လည်း ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
– ဒီနှစ်သင်းဟာ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီ နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် တစ်အုပ်စုတည်း ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တုန်းက မန်ယူအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ (၂-၁)ဂိုး၊ အဝေးကွင်းမှာ (၃-၀)ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
– မန်ယူအသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံနောက်ဆုံး (၃)ကြိမ်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပွဲတိုင်းအနိုင်ရခဲ့တယ်။
– မန်ယူနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ဟာ စုစုပေါင်း (၁၂)ကြိမ် ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး ဒါဟာ ဥရောပပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အကြိမ်အများဆုံး ဆုံတွေ့တဲ့ နှစ်သင်းဖြစ်သလို မန်ယူက (၅)ပွဲနိုင်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်က (၅)ပွဲနိုင် (၂)ပွဲ သရေကျခဲ့တယ်။
– ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့် နောက်ဆုံး(၂၃)ပွဲမှာ (၂)ပွဲပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး (၁၄)ပွဲနိုင်၊ (၇)ပွဲသရေကျခဲ့သလို ရှုံးခဲ့တဲ့ (၂)ပွဲက စပိန်ကလပ်တွေကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
– ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ မန်ယူတိုက်စစ်မှူး ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Marcus Rashford ရဲ့ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲ့အကြိမ်က (၉)ကြိမ်အထိရှိနေပြီး သူ့ထက်ပိုများတာဆိုလို့ အေဂျက်စ်ကစားသမား Hakim Ziyech (၁၂ကြိမ်)ပဲ ရှိပါတယ်။
– စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသင်းဟောင်း(လစ္စဘွန်း၊ မန်ယူ)တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲ (၆)ပွဲမှာ (၅)ဂိုးသွင်း ဂိုးဖန်တီးမှု (၂)ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
မနျယူ-ဂြူဗငျတပျဈပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
ဒီနေ့ (အင်ျဂါ)မှာ ကစားမယျ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲတှထေဲက ပရိသတျ စိတျဝငျစားမှု အမြားဆုံးက မနျယူ-ဂြူဗငျတပျဈပှဲပါပဲ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မနျခကျြစတာမွကေို ပွနျလာမှာ၊ မနျယူကှငျးလယျလူ ပေ့ါဘာ Pogba အသငျးဟောငျး ဂြူဗငျတပျဈကို ပွနျရငျဆိုငျရမှာ စတဲ့အခကျြတှကွေောငျ့ ဒီပှဲက ဆှဲဆောငျမှုရှိနတောဖွဈပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ မနျယူ-ဂြူဗငျတပျဈတို့ ကစားမယျ့ပှဲမှာ ဘယျလို ထူးခွားခကျြတှရှေိလဲ၊ ဒဏျရာရကစားသမားစာရငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျရပါတယျ . . .
မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho ဟာ အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ Alexis Sanchez ကို ဒီပှဲအတှကျ လူစာရငျးမှာ မထညျ့သှငျးခဲ့ပါဘူး။ ဖယျလနေီ Marouane Fellaini ၊ ဖီးလျဂြုံးဈ Phil Jones ၊ တှမျမီနေး Scott McTominay ၊ လငျဂတျ Jesse Lingard ၊ ဒါလော့တျ Diogo Dalot တို့ အားလုံး ရာနှုနျးပွညျ့ကွံ့ခိုငျမှု မရှိသေးလို့ ဒီပှဲကို လှဲခြျောဖို့ မြားပါတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈကှငျးလယျလူ အမျမရီခနျြ Emre Can ဟာ အခုပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈသလို လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျမှာ ဘယျဘကျခွခေငျြးဝတျ ဒဏျရာရခဲ့တဲ့ မနျဇူကဈ Mario Mandzukic လညျး ပါဝငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
– ဒီနှဈသငျးဟာ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီ နောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျ တဈအုပျစုတညျး ကခြဲ့တာဖွဈပွီး နောကျဆုံးတှဆေုံ့ခဲ့တုနျးက မနျယူအသငျးဟာ အိမျကှငျးမှာ (၂-၁)ဂိုး၊ အဝေးကှငျးမှာ (၃-ဝ)ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။
– မနျယူအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံနောကျဆုံး (၃)ကွိမျမှာ ဂြူဗငျတပျဈကို ပှဲတိုငျးအနိုငျရခဲ့တယျ။
– မနျယူနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈတို့ဟာ စုစုပေါငျး (၁၂)ကွိမျ ဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး ဒါဟာ ဥရောပပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ အကွိမျအမြားဆုံး ဆုံတှတေဲ့ နှဈသငျးဖွဈသလို မနျယူက (၅)ပှဲနိုငျ၊ ဂြူဗငျတပျဈက (၅)ပှဲနိုငျ (၂)ပှဲ သရကေခြဲ့တယျ။
– ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုအဆငျ့ နောကျဆုံး(၂၃)ပှဲမှာ (၂)ပှဲပဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး (၁၄)ပှဲနိုငျ၊ (၇)ပှဲသရကေခြဲ့သလို ရှုံးခဲ့တဲ့ (၂)ပှဲက စပိနျကလပျတှကေို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
– ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျမှာ မနျယူတိုကျစဈမှူး ရပျရျှဖို့ဒျ Marcus Rashford ရဲ့ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးတဲ့အကွိမျက (၉)ကွိမျအထိရှိနပွေီး သူ့ထကျပိုမြားတာဆိုလို့ အဂေကျြဈကစားသမား Hakim Ziyech (၁၂ကွိမျ)ပဲ ရှိပါတယျ။
– စီရျောနယျလျဒိုဟာ အသငျးဟောငျး(လစ်စဘှနျး၊ မနျယူ)တှနေဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲ (၆)ပှဲမှာ (၅)ဂိုးသှငျး ဂိုးဖနျတီးမှု (၂)ကွိမျ ပွုလုပျခဲ့တယျ။